Zahao ny lahatahiry Library, nafenina tsy misy tohiny ao amin'ny MacOS Sierra | Avy amin'ny mac aho
Jereo ny lahatahiry Library, nafenina tsy misy tohiny ao amin'ny MacOS Sierra
Mihamaro ny mpampiasa izay, atolotry ny mpampiasa Mac, manapa-kevitra ny hamadika ny solosain'i Apple. Matetika izy ireo dia mitady ny tsy fitoviana, miaraka amin'ny rindrambaiko sy ny fitaovana ampiasaina mba hifaneraserana. Fantatry ny mpandrindra MacOS izany ary Miezaka ny manao rafitra fandidiana ho azo ampiharina sy tsotra ho an'ny mpampiasa izy ireo izay manomboka ny diany amin'ny Mac voalohany.
Amin'ny alàlan'ny default, mpampiasa Windows iray miditra matetika ireo lahatahiry rafitra. Ao amin'ny MacOS, raha tsy fantatrao amin'ny halaliny dia azonao atao ny manova zavatra tsy tokony hataonao toy ny: mamafa ny rakitra, na mamindra ny lahatahiry any amin'ny toerana tsy mety, sns.
Mety noho izany antony izany, ao amin'ny kinova MacOS Sierra ankehitriny, miafina ny fampirimana famakiam-boky default. Voalohany indrindra, lazao aminao fa ny mpampiasa mahazatra tsy hanadino ilay fampirimana resahina, fa ny mpampiasa mandroso izay te-hahafantatra na hamafa fampahalalana amin'ny kapila mafy, dia mety mitaky fidirana ao. Ny fisie dia misy rakitra fampirimana rakitra, cache ary preferences.
Noho izany, nafenina ny fampirimana, satria tsy hitantsika amin'ny menio mahazatra azy io: eo amin'ny menio ambony "menu" Go ".
Mba hidirana amin'izany dia tsy maintsy ataontsika izao hetsika izao:
Ao amin'ny menio Finder, kitiho ny «Mandehana».
Rehefa miseho ny menio, tsy maintsy tsindrio ny fanalahidy «Alt» toy ny majika, miseho ny safidin'ny Library, eo afovoan'ny menio.
Mandrosoa nefa tsy mamoaka ny cursor amin'ny fiasa ary ho hitanao ny fomba hidiranao amin'ny lahatahiry mpampiasa mavitrika.
Toy ny mahazatra dia manana a fitetezana lakile hahafahantsika miditra ao amin'ilay mitady, mivantana mankany amin'ny folder an'ny mpampiasa mavitrika. Ity hitsin-dàlana fitendry ity dia: Command + Shift + L.
Ary farany, raha te hanana ny safidin'ny tranomboky hita foana isika amin'ny asan'ny "Mandehana" an'ny Finder, dia azontsika atao ny mampihetsika azy, noho ny fanampian'ny alalan'ny terminal. Amin'ity tranga ity, ny tsipika baiko hanoratra dia ireto manaraka ireto:
Toy ny mahazatra, mamporisika anao izahay tsy hikasika na inona na inona ao amin'ny fampirimana Library, raha tsy azonao antoka tsara izany hetsika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Jereo ny lahatahiry Library, nafenina tsy misy tohiny ao amin'ny MacOS Sierra
Niezaka ny nahita ilay fampirimana tamin'ny alàlan'ny fanindriana Wing aho ary ny zavatra tokana mitranga dia ny fampidirana ny kisary Command eo alohan'ny fampirimana misy. Avy amin'ny folder Library na vaovao misy an'ity tendrony ity. Ny lalan-kely fitendry ihany no azoko idirana.
Errata amin'ilay hevitra teo aloha: Vakio Alt, fa tsy Ala.
Marina, izay lazainao dia mitranga amin'ny fanavaozana vaovao amin'ny 10.12.2.
Andrea dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, misaotra tamin'ny fandraisana anjara.
Te hanana ny Library foana aho, fa ny baiko: "chflags nohidden ~ / Library /" dia tsy mandeha amiko ao Terminal. Niezaka nanova ny Library ho Library, Library aho ... ary tsy nisy
Fiarahabana ary Misaotra hatrany.
Valiny tamin'i Andrea
Omar meneses dia hoy izy:
Tokoa. Tsy mandeha izay voasoratra ato amin'ity lahatsoratra ity.
Valiny tamin'i Omar Meneses
Ny AirPods dia efa eo amintsika, ny boky torolàlana ihany koa
Araka ny voalazan'i Apple dia ho tonga amin'ny volana febroary ihany ny headphones BeatsX